Indlela yokwenza "VKontakte" a lot of abangane? Lona omunye wemibuzo ethandwa kakhulu wabuzwa abasebenzisi eziningi kule nethiwekhi yokuxhumana nomphakathi. Inani elikhulu oxhumana angathuthukisa ikhasi simo sakho, ukukhuthaza ngempumelelo yezinsizakalo zethu, imikhiqizo, nokunye. Kulesi sihloko sizoxoxa ngezindlela izindlela ezimbalwa ukukopela abangane. Zilungiselele yokuthi une umjuluko kuhle, uma ufuna imali futhi akudingeki ukuba akhokhe imali enkulu ngenxa Imisebenzi eprofetjhinali.
Indlela yokwenza "VKontakte" a lot of abangane? indlela 1
Thumela izimemo kubasebenzisi. Ukhululekile ukucinga abangane. Ngokwesibonelo, ukuthumela izimemo abantu abangabangane nabangani bakho, noma ngephutha hit abantu. Indlela kunzima ngempela futhi ukungasebenzi kahle. Ubuningi ngosuku ungagcwalisa uhlu lalabo oxhumana nabo kuze kube abantu 20. Lokhu kungenxa ukulinganiselwa isayithi - nsuku zonke, ungathumela akukho izicelo zomsebenzi ezingaphezu kuka-20 ngenxa kwalokho abangane. Kulokhu, hhayi iqiniso lokuthi wonke umuntu ommemile, uzokuphendula omuhle.
Indlela yokwenza "VKontakte" a lot of abangane? indlela 2
Le ndlela kuyokusiza ukuba uthole abasebenzisi xaxa. ke Kuyinto ukuthola imiphakathi namaqembu thematic. Esikhathini yokuxhumana "VKontakte", kukhona imiphakathi eziningi ezisiza ukwenza abangane. Umgomo we operation simiswe ngalendlela lelandzelako: uya kubo, shiya isicelo sakho ku-odongeni noma idokhumenti ngokukhethekile-afanele kanye elikuli umsebenzisi niyozenezelelwa kuwe. Futhi ungenza ngelakho, kokubukeka njenge isicelo sakho isiphakamiso ukuthumela isimemo ubungani. Ungakhohlwa imikhawulo - 20 ngosuku. Inani labantu kabani isimemo ungathatha akuyona esilinganiselwe. nemibi Obvious: Ezokuphatha zaleli sayithi ukufriza ngoba inani elikhulu izicelo zekhasi. Ngakho uma unquma ukusebenzisa le ndlela, zama ukwengeza abantu abambalwa ngesikhathi, ukuze ngingasebenzisi ukuze zidonse ukunaka sokuphepha "VKontakte".
Indlela yokwenza "VKontakte" a lot of abangane? indlela 3
Amasevisi evala abangane futhi uvumele ukwakha ohlwini loxhumana nabo. Yiziphi? Lezi izindawo ezidla ekhethekile ukusebenza ngendlela elandelayo: nina nenza imisebenzi elula (isibonelo, Njengokuthi isithombe, ukuqala iqembu, ngibhale nokunye), futhi uthole ibhonasi, okungase kusetshenziswe ukukhokhela ukukopela. Yeka ukuthi yaphumelela kanjani intando le ndlela kuxhomeke ngokuphelele kuwe. Usuku kungenzeka ukuzuza 100 noma ngaphezulu.
Kanjani ukuze uthole okuningi "VKontakte" abangane? indlela 4
Lona elula futhi 100% indlela ukuze ungeze uhlu abangane bakho. Amasevisi evala, esiye ngaphambilini wathi, ukufeza izidingo zakho ukukhokha. Yini embi ngalo le ndlela wukuthi iningi kulezi zithathwa msebenzi "wholesale", okungukuthi, lapho unquma engeza 5,000 noma ngaphezulu (kuncike Inkomba isisetshenziswa ingahluka). Ngakolunye uhlangothi, isevisi ekhokhelwe, awukwazi ukusinda, futhi qiniseka ukuthi maduze uzothola eside elindelwe "abangane."
Manje, sabatshela wena indlela yokwengeza eziningi abangane "VKontakte". Kungenzeka ukwenza ngaphandle ukutshalwa kwezimali futhi bazikhandle izinsuku eziningana noma amasonto, hhayi ukuchitha imali.
Lesifunda ukuthuthukiswa amabhange. amabhange ukuthuthukiswa amazwe ngamazwe nawesifunda emikhankasweni
Vakashela aquarium e Volgograd!